Manana vola ampiasaina amin’izany ihany ve, maninona raha hanampiana amin’ny ady atao amin’ity areti-mandoza ity, hoy ny sasany? Ny filoham-pirenena aza efa niantso fa fotoanan’ny firaisankina izao ary tokony hanao rojom-bavaka isan’andro ny malagasy, hoy ny hafa. Rehefa dinihina ireo fanehoan-kevitra dia saika mitodika amin’ny hoe miantso firaisankina ny filoham-pirenena raha toa ka mbola manam-potoana hiantsoana fanenjehana kosa ny minisitry ny serasera. Ratsy ary voararan’ny lalana rahateo tokoa ny fanelezana tsaho saingy tsy maintsy nolazaina ampahibemaso toy ireny ve ny fankasitrahana ireo mety ahita izay lalana hisamborana ny heverina ho mpanao ratsy izay ao anatin’izao fotoana hanentanana ny vahoaka tsy hivoaka ny fonenany avy izao? Tsy izany indray aza ve no mety ho fakam-panahy ho an’ireo olom-pirenena sasany hanosika azy hivoaka ny tranony, ohatra? Efa maro ny tsikera nandeha mikasika ny seraseran’ny fitondram-panjakana tao anatin’izao fitondrana izao ary kiana matetika heno ny hoe lany andro amin’ny sehoseho sy ny seho ivelany. Misy fanapahan-kevitra tsy voatery ho lazaina anefa, hoy ny filoham-pirenena izay, ny 25 martsa teo.